Imigaqo yeNkonzo ("iMigaqo")
Ukuhlaziywa kokugqibela: Jan 5, 2021
Nceda ufunde le Migaqo yeNkonzo ("iMigaqo", "iMigaqo yeNkonzo") ngononophelo ngaphambi kokusebenzisa iwebhusayithi ye-https: //gamepron.com ("Inkonzo").
Ukufikelela kwakho kunye nokusetyenziswa kweNkonzo kunikwe imimiselo yokwamkelwa kwakho kunye nokuthotyelwa kwale Migqaliselo. Le Miqathango isebenza kubo bonke abatyeleli, abasebenzisi kunye nabanye abafikelela okanye basebenzise iNkonzo.
Ngokufikelela okanye ukusebenzisa iNkonzo uyavuma ukuba ubophelelwe yiMigqaliselo. Ukuba awuvumelani naliphi na inxenye yemigangatho ngoko awukwazi ukufikelela kwiNkonzo.
Imigaqo neMiqhelo ngokubanzi
Kuya kufuneka unikezele ngolwazi oluchanekileyo olufunekayo ukugqibezela inkqubo yokubhalisa.
Inkonzo ayizukubenoxanduva lwayo nayiphi na ilahleko yedatha, ukubhengezwa kwedatha okanye umonakalo owenzekileyo oya kuthi ubangelwe kukungafumaneki iphasiwedi kunye neakhawunti.
Akufuneki wophule nawuphi na umthetho okanye wenze nayiphi na into engagunyaziswanga okanye engekho mthethweni ngelixa, kwaye usebenzisa le nkonzo.
Uya kuba noxanduva lwayo yonke imixholo kunye nomsebenzi obanjwe phantsi kweakhawunti yakho.
Kuya kufuneka uneminyaka eli-15 okanye ngaphezulu usebenzise le Nkonzo.
Inkxaso ifumaneka kuphela kubanini beakhawunti yokuhlawula ngokusebenzisa iiforamu zewebhusayithi yethu.
Ukusetyenziswa kweNkonzo kumngcipheko wakho kuphela. Inkonzo ibonelelwa “njengokuba kunjalo”.
Akufuneki uthengise kwakhona, ukope okanye wenze iikopi zenkonzo, okanye nayiphi na inxalenye yayo, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo evela kule Nkonzo.
Umdlalo. ayiqinisekisi ukuba inkonzo izakuphendula iimfuno zakho, ayizukuba nazimpazamo, iya kukhuseleka okanye iya kufumaneka ngalo lonke ixesha.
Inkonzo inamalungelo ayo okususa, okanye ukungasusi, nawuphi na umxholo esingavumelekanga okanye osikhubekisayo. Nangona kunjalo, nakuphi na ukuphathwa gadalala okubhaliweyo okanye isoyikiso esenziwe kwiakhawunti kuyakukhokelela ekuphelisweni kwangoko kweakhawunti.
Uyayiqonda ngokucacileyo kwaye uyavuma ukuba iNkonzo ayizukubekwa tyala ngomonakalo othe ngqo okanye ongathanga ngqo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumonakalo wokulahleka kwedatha, inzuzo, okanye enye ilahleko engaphathekiyo ebangelwa kukusetyenziswa ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwenkonzo.
Uyavuma ukukhusela kwaye ubambe engenabungozi INkonzo kunye namahlakani ayo, amagosa, iiarhente, kunye nabasebenzi ngokuchasene nelahleko okanye isoyikiso ilahleko okanye inkcitho ngenxa yetyala okanye ukubakho koxanduva lweNkonzo okanye ngenxa yamabango omonakalo. Kwimeko enjalo, iNkonzo iya kukunika isaziso esibhaliweyo sebango elinjalo, isimangalo okanye isenzo.
Ukufikelela kunye nobudlelwane____________________________
Uyavuma ukuba awungomqeshwa wakwaMicrosoft, uMdibaniso, iNexon, iWargaming, Ubisoft, iStudiyo sasendle, ubuGcisa be-elektroniki, iDice, iReto-Moto, iRockstar, iMidlalo ye-2K, iActivision, okanye iOfworld Industries, kwaye awulolungu losapho okanye umhlobo Koku kungasentla.
Uyavuma ukuba awungomqeshwa wayo nayiphi na ifemu yomthetho enesivumelwano noMicrosoft, Umdibaniso, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Ubugcisa be-elektroniki, i-DICE, iReto-Moto, iRockstar, iMidlalo ye-2K, iActivision, okanye iOfworld Industries kwaye ayisiyiyo ilungu losapho okanye umntu omaziyo kule firm.
Uyavuma ukuba awungomqeshwa wayo nayiphi na inkampani enikezela ngenkonzo yokulwa ukukopela kubandakanya iPunkbuster, iValve, iGameBlocks, iBattleye okanye i-EasyAntiCheat, kwaye awulilo ilungu losapho okanye umntu oqhelene naye apha ngasentla.
Awunguye umqeshwa waso nasiphi na isitudiyo sophuhliso lomdlalo.
Awuthengi kwindawo yethu ngeenjongo zophando.
Uyavuma ukungazenzi omnye umntu.
Awunakho ukufikelela kule Nkonzo, iwebhusayithi, iiforamu, okanye isoftware yeNkonzo ukuba ngaba kukho la magama angasentla ayasebenza kuwe.
Ukuba wophula nayiphi na le migaqo ingentla uyavuma ukuhlawula i-Gamepron $ 30,000 USD ngokungena nganye kwisoftware kunye neeforamu zethu.
Umdlalo Ayizukubekwa tyala nangayiphi na into ethe ngqo, engathanga ngqo, ehambelana nayo, ekhethekileyo, eyohlwayayo, okanye eyintlekele nakweyiphi na imeko, ebangelwe ngumxholo okanye ukufikelela kwiwebhusayithi.
Izitshixo zeCD, izitshixo zeLayisenisi, amaqhosha emveliso_____________________________
Nayiphi na iakhawunti yakho yomdlalo, iiakhawunti ezikwi-Intanethi, imidlalo, amaqhosha kunye nekhompyuter luxanduva lwakho ngokupheleleyo. Ukuba usebenzisa okanye usebenzisa kakubi isoftware yethu kwaye uvinjelwe, kubonwa njengoxanduva lwakho.
Xa uthenga inkonzo yobhaliso kwiwebhusayithi yethu, umrhumo uya kuqala xa siqinisekisa intlawulo yakho. Ubulungu buza kuyeka ekupheleni kwexesha elithengiweyo Asikufumani kubhaliswa phantsi kwalo naliphi na ixesha, ngaphandle kokuba sichaze njalo. Ukuba uthenge umrhumo oqhubekayo ohlaziya ukuphela kwenyanga unokukurhoxisa oku kwiphepha lethu levenkile ukuze ungahlawulwa kwinyanga ezayo. Imirhumo inokunika iphepha-mvume elingasikelwanga mda lokusebenzisa isoftware efikeleleka kuphela kubasebenzisi beqela elithile labasebenzisi be-VIP, nangona kunjalo oku kufikelela kunokuba phantsi kokupheliswa, ixesha lokuphumla okanye ukuyeka. Kwezinye iimeko intlawulo iya kunikwa. Izitshixo zokuvula ezisebenza ngokusemthethweni ziya kunika ixesha elithile kubasebenzisi ukuba bafumane ukufikelela kwinkonzo yesoftware esiyibonelelayo.
Abasebenzisi akufuneki babhalise isitshixo esitsha kude kuphele ixesha lokubhalisela okusebenzayo. Ixesha lokubhalisela ixesha aligcini kodwa liya kusebenza ngaxeshanye ukuba ngaphezulu kweqhosha elinye libhalisiwe kwiakhawunti enye. Asizukuhlengahlengisa / songeze ixesha lobhaliso kwiiakhawunti zabasebenzisi naphantsi kwazo naziphi na iimeko ukuba usebenze ngaphezulu kwesitshixo esinye ngexesha lokuvula ixesha lokubhalisela.
Kwimeko apho umthengi efuna ukutshintsha inkonzo, iya kuba phantsi kwe-20-40 ye-USD "yokutshintsha umrhumo" kunye nokwahluka kwexabiso ekufuneka kuhlawulwe. Ukutshintshwa kwezitshixo AKUKHO kunikezelwa ngesiqhelo kwaye kuxhomekeke kuLawulo lwewebhusayithi ukukhetha ukuba iimeko zinokusetyenziswa kweziphi iimeko. Yiyo loo nto umthengi engenakulindela ukuba angazitshintsha iinkonzo ngexesha lokubhalisela.
Emva kokuthenga isoftware uyakufumana isitshixo, kunye nethuba lokukhuphela isoftware, Nje ukuba usifumene / usijongile isitshixo akukho mbuyekezo iya kunikwa.
Ukuhanjiswa kwesitshixo kwabanye abantu kuyavunyelwa, ngokwenza oku nangona kunjalo ixesha liya kuncitshiswa ngokuzenzekelayo kwisitshixo sakho selayisensi.
Luxanduva lwakho ukujonga ukuba imveliso iyahambelana na nekhompyuter yakho, yiyo yonke imveliso ye-Intel isebenza kuphela nge-Intel's CPU ezichazwe ngokucacileyo kumaphepha emveliso. Akukho mbuyiselo iya kukhutshwa okanye akukho zitshixo zintsha zezinye iimveliso ezinokubonelelwa ukuba wenze le mpazamo. Ukuba kwithuba esingakhange sihambise isitshixo kwaye uyakuqaphela oku siza kukunika enye imveliso ukuba ixabiso liyafana okanye alihlawulwanga.
Luxanduva lwakho ukujonga ubume bemveliso, asizukukhupha mbuyiselo xa imveliso ikho ngaphandle kweintanethi okanye kuvavanyo. Kuya kufuneka ulinde de ibe imveliso ibuyile kwi-intanethi okanye siza kukunika enye imveliso ukuba ixabiso elifanayo okanye litshiphile.
Sinelungelo lokususa nayiphi na into kuyo nayiphi na imveliso nangaliphi na ixesha. Sikwenza oku ngenxa yokukugcina ukhuselekile kumdlalo. Sisebenza nzima ukubuyisa amanqaku kodwa ngexesha lakho inqaku elinye okanye ezimbini zinokususwa. Nceda unxibelelane nenkxaso ngencoko ebukhoma ukuze ufumanise ukuba ngaba kukho naziphi na izinto ezisusiweyo ngaphambi kokuthenga kwakho, ukuba uyathenga kwaye ezinye izinto zisusiwe sinelungelo lokungabuyisi mali.
Nceda ujonge i-livechat / inkxaso ukuze ubone ukuba imveliso isestokhwe, ukuba asikho kwisitokhwe kungathatha ukuya kwiintsuku eziyi-1-2 zeshishini ukuhambisa kwiimeko ezinqabileyo, ukuhanjiswa kwesitshixo kuqhele ukwenziwa kwangoko okanye ngaphakathi kweeyure okanye imizuzu embalwa .
Amaxabiso, Intlawulo, Ukubuyiselwa imali _________________
Iakhawunti yePaypal, onelungelo lokuyisebenzisa, iyafuneka nakweyiphi na iakhawunti ehlawulayo okanye isitshixo.
I-Mastercard, i-Visa, i-Amex okanye ezinye iindlela zokuhlawula onelungelo lokuzisebenzisa, ziyafuneka kuyo nayiphi na iakhawunti ehlawula okanye isitshixo.
Ukuba ubhalisela iakhawunti ehlawulayo, uya kuhlawuliswa inyanga nenyanga, ngekota, okanye ngonyaka ngokuxhomekeke kwisicwangciso esikhethiweyo, ukuqala ngomhla ogunyazise ukubhaliswa okuphindayo nge-Paypal okanye nge-Mastercard, Visa, Amex okanye enye intlawulo.
Zonke iintlawulo ezenziwe nge-Paypal kunye ne-Mastercard, i-Visa, i-Amex okanye enye intlawulo yeyokubhaliswa okunganyangekiyo kwiforum yethu. Emva kokuba ufikelele kwiforum yabucala okanye isoftware ebonakalayo, ufumene ixabiso elipheleleyo lokuthenga kwakho.
Njengoko konke ukuthengwa kwenzelwe ubhaliso lweforum ebonakalayo kunye nesoftware ebonakalayo, akusayi kubakho mbuyekezo eyamkelweyo.
Iintlawulo ozenzayo azibuyiswa kwaye zihlawuliswa kwangaphambili. Akusayi kubakho mbuyekezo yalo naluphi na uhlobo okanye iikhredithi ezizayo ekusetyenzisweni kwenyanga ngeenkonzo.
Ukufikelela kwiiforum zethu zabucala, okanye ukufikelela kwisoftware ebonakalayo efuna zombini iakhawunti ehlawulekayo, ulifumene ixabiso elipheleleyo lomrhumo wakho kwaye awuyi kulungela nayiphi na imbuyiselo okanye ityala.
Yonke imirhumo ikhethekile kulo naluphi na uhlobo lwerhafu, iirhafu okanye imisebenzi ebekwe ngabasemagunyeni erhafu.
Inkonzo ayizukubenoxanduva lwayo nayiphi na ilahleko yemixholo okanye amanqaku okanye ukungakwazi ukwenza imisebenzi ngenxa yokwehliswa kweakhawunti.
Ukurhoxisa kunye nokuphelisa umsebenzi _______________
Ekuphela kwendlela yokurhoxisa nakuphi na ukubhaliswa okuphindaphindayo kwiNkonzo nge-Paypal okanye nge-processor yethu yokuhlawula.
Ukuphela kokubhaliselwa okuhlawulelweyo, iakhawunti yakho iya kuthotyelwa kwisikhundla sobulungu basimahla.
INkonzo inelungelo lokungavumi inkonzo kuye nakubani na nangasiphi na isizathu nangaliphi na ixesha.
Inkonzo inelungelo lokuphelisa iakhawunti yakho. Oku kuya kubangela ukucinywa okanye ukucinywa kweakhawunti yakho kwaye uya kuthintelwa ekubeni ungene kwinkonzo.
Ukusilela kweNkonzo ekusebenziseni okanye ekunyanzeliseni naliphi na ilungelo okanye ulungiselelo lweMigaqo yeNkonzo ayizukubekwa kwelungelo lelo okanye elo lungiselelo. Imigaqo yeNkonzo ibandakanya sonke isivumelwano phakathi kwakho neNkonzo kwaye ilawula ukusebenzisa kwakho iNkonzo, ithathe indawo yazo naziphi na izivumelwano zangaphambili phakathi kwakho kunye neNkonzo.
Inkonzo inelungelo lokuhlaziya kunye nokutshintsha iMigaqo yeNkonzo amaxesha ngamaxesha ngaphandle kwesaziso. Naluphi na utshintsho okanye uhlaziyo olwenziwe kwisicelo luxhomekeke kule Migaqo yeNkonzo. Ukuqhubeka nokusebenzisa inkonzo emva kolo tshintsho okanye uhlaziyo lwenziwe kuyakwenza imvume yakho kolu hlaziyo kunye / okanye kutshintsho.
Ngayiphi na imeko unombuzo malunga nale migaqo yenkonzo, ungayithumela nge-imeyile [email protected]